William Wordsworth. Kusafa kwemadetembo ake | Zvazvino Zvinyorwa
William Wordsworth. Mufananidzo waBenjamin Haydon.
William Wordsworth Akazvarwa musi waApril 7, 1770, muCockermouth. Zita rekutanga reiyo Chirungu preromanticism, iye uye Samuel Coleridge vanoonekwa se nyanduri dzakanakisa dzeChirungu dzerudo. Zvirinani ivo vakatanga kufamba kwainge kwakapararira muEurope muzana ramakore rechiXNUMX. Nhasi ndinosarudza 4 yenhetembo dzake kupemberera zuva rekuzvarwa kwake.
1 Nziyo dzake dzemitambo
2 Ode kune kusafa
3 Aive mweya wemufaro
4 Kushamisika nemufaro
5 Lucy nhetembo
5.1 Kupenga kusinganzwisisike kwekuda kwandakaziva
Zvake Lyrical ballads
Basa rake rinonyanya kukosha nderiri. Musoro wekutanga waive Lyrical ballads, nedzimwewo nhetembo. Uye iko kuunganidzwa kwe nhetembo rakaburitswa muna 1798 pamwechete neshamwari yake Samuel Taylor Coleridge.
Yakakamurwa kuita mavhoriyamu maviri, ine mamwe ezvinyorwa inonyanya kukosha mukugadzirwa kwayo. Chinyorwa chekutanga chakaratidza ina nhetembo isina kunyorwa kubva Coleridge. Imwe yacho ibasa rake rinozivikanwa kwazvo: Rwiyo rwechikepe chekare. Yakanga iri, nekutanga uye mukati, dombo rekona reiyo kudanana uyo akapa nzira yekubuda nayo. Kubudirira kwayo kwanga kusiri kukuru mumisimboti iyoyo, asi mhedzisiro inotevera yaizoita sarudzo uye ine simba.
Izvi ndizvo nhetembo ina akasarudzwa kubva pabasa rake rakawandisa: Ode kune kusafa, Aive mweya wemufaro, Kushamisika nemufaro, uye mumwe wake Lucy nhetembo.
Ode kune kusafa
Kunyangwe kupenya uko
kamwe yaipenya kwazvo
nhasi ngazvive zvakavanzika pameso angu nekusingaperi.
Kunyangwe maziso angu asisiri
uri kuona here kupenya chaiko
Izvo muhuduku hwangu zvakandishamisa
Kunyangwe pasina chingaite
dzosera awa rekubwinya muhuswa,
sei runako runogara ruchigara mundangariro ...
Mune izvo zvekutanga
yakabuda kubva mukutambura kwevanhu,
uye mukutenda kunotarisa kuburikidza ne
Kutenda kumoyo wemunhu,
nekuda kwehunyoro hwavo, ivo
mufaro uye kutya kwavo, ruva rakaderera kana richitumbuka,
inogona kundikurudzira mazano kazhinji
anoratidza kudzika zvakanyanya
Aive mweya wemufaro
meso angu achipenya.
chimiro chinoyevedza chakatumirwa;
Meso ake akaita senyeredzi dzemambakwedza
Uye kubva pakuvira kwezuva zvakare bvudzi rake rakasviba.
Asi vamwe vake vese
yakabva muchirimo nemambakwedza ayo emufaro;
fomu yekutamba, mufananidzo unopenya
kushungurudza, kuvhundutsa uye dzinde.
Ndakanyatsotarisisa kwaari: mweya
Asi mukadzi futi!
Chiedza uye ethereal mafambiro avo epamba,
Uye nhanho yake yaive yerusununguko rwemhandara;
ndangariro dzinotapira, uye zvipikirwa zvakare;
kwezvokudya zvezuva nezuva zvekuvapo,
nekuda kwekurwadziwa kwenguva pfupi, hunyengeri hwakareruka,
kurumbidza, kushora, rudo, kutsvoda, misodzi, kunyemwerera.
Iye zvino ndinoona nemaziso akanyarara
kupomba kumwe chete kwemuchina;
ari kufema mweya unofungisisa,
mufambi pakati pehupenyu nerufu,
chikonzero chakasimba, kuda kwakadzikama,
kutsungirira, kufanoona, simba uye kugona.
akaronga zvakanaka kunyevera,
kunyaradza, uye kurongeka.
Uye zvakadaro mweya unopenya
pamwe nechiedza chengirozi.
Kushamiswa nemufaro, kusashivirira semhepo,
Ndakatendeuka kuti nditange kudzoka kwangu.
Uye naani, kunze kwako,
akavigwa zvakadzika mukati meguva rakanyarara,
munzvimbo iyoyo kuti hakuna vicissitude inogona kukanganisa?
Rudo, rudo rwakatendeka, mupfungwa dzangu rwakakuyeuchidza,
Asi ndaikukanganwa sei Kuburikidza nesimba ripi,
kunyangwe muchikamu chidiki cheawa,
akandinyengedza, akandiita bofu, kune kurasikirwa kwangu kukuru!
Kwaive kurwadziwa kwakanyanya kusati kwambotakurwa,
Kunze kweimwe, imwe chete, pandakanzwa kuparara
ndichiziva kuti pfuma isingaenzaniswi yemoyo wangu yakanga isisipo;
kuti kana nguva iripoyi, kana makore asati aberekwa,
vanogona kudzosa kumeso kudenga.
Kupenga kusinganzwisisike kwekuda kwandakaziva
Kubuda kwekuda kwandinoziva:
uye ini ndichatsunga kuzvitaura,
asi munzeve yemudiwa chete,
Paakandida aiona mazuva ese
nyowani seruva muna Chikumi.
Ndakanongedzera nhanho dzangu kumba kwake,
pasi pehusiku hwemwedzi.
Ndakatarisa maziso angu pamwedzi,
pamusoro pehupamhi hwese meadhi;
Nhanho inokurumidza bhiza rangu rakasvika
mumigwagwa iyoyo inodiwa kwandiri.
Uye zvino tauya kubindu;
Uye pataikwira chikomo
mwedzi wainyura muchivako chaLucy;
Yakasvika padyo, ndokuswedera padyo.
Mune imwe yehope dzakanaka idzo ndakarara
Kunaka kwakanaka kwechimiro chemhando!
Zvichakadaro maziso angu akasara
pamusoro pemwedzi wakadonha.
Bhiza rangu rakapfuura; ngowani ku helmet
yakawedzera, uye haina kumbomira:
payakaiswa pasi pedenga reimba
pakarepo, kupenya kwemwedzi kwakadzima.
Iko kuonga uye kwepfungwa pfungwa dzichapfuura
Oh Mwari wangu! Ndakadaro ndobva ndachema
Dai Lucy akafa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » William Wordsworth. Kusafa kwemadetembo ake
Ndiani muturikiri wenhetembo idzi kuSpanish?
Pindura kuna Natura Leza
5 makuru ma comics: Ibáñez, Escobar, Vázquez, Segura naPeñarroya